Burmese taste - Iora: Farmers' Market ကအပြန်
Posted by Iora at 3:53 AM
Qt August 5, 2012 at 5:53 AM
အစကနေ အဆုံးထိ အကုန်သရေကျတယ် ချစ်မရေ....
အသီးရွက်တွေ ပေါတာလည်း သဘောကျတယ်
ချဉ်ပေါင်ရွက်ဆိုတာ ဒီမှာတော့ နွေရာသီ မြန်မာဆိုင်တွေက ရောင်းမှ စားရတာ မရေ...
ငရုတ်ရွက်သုတ်လေး ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ပျော်လိုက်ထှာ အရမ်းပဲ
ငါးရံ့ခြောက်ခွဲနည်း မျှော်တဲ့အထဲမှာ ညလေးလည်း ပါတယ်နော် :))
Candy August 5, 2012 at 6:52 AM
ဟင်းပွဲလေးက သရေကျစရာပဲ မမရယ်.. ကန်ဒီက အသီးအရွက်အရမ်းကြိုက်တာ..
စံပယ်ချို August 5, 2012 at 7:07 AM
ဗရုံသီးသားလေးတွေ တို့စားချင်လိုက်တာ သရေတောင်ကျတယ်
ငရုပ်ရွက်သုပ် ပင်စိမ်းဟင်းရည် တို့စရာတွေ အားလုံးကိုကြည့်မ၀ဘူးကွယ်
Aunty Oo August 5, 2012 at 7:18 AM
AH August 5, 2012 at 7:28 AM
ဗိုက်ဆာထှာ... ဟိုက တို့စရာဗန်းကြီးကို ၃ ၄ ခေါက် စောင်းငန်း စောင်းငန်းနဲ့ ကြည့်သွားတယ်.. :P
မီးမီးငယ် August 5, 2012 at 8:28 AM
Iora August 5, 2012 at 11:27 AM
အသီးအရွက်တွေကအဲလို Farmers' Market သွားမှအာရှအရွက်တွေရတတ်တာပါ။ ဆုိုင်တွေမှာဆုိုရင်တော့တရုတ်ကြိုက် မုန်ညင်းမျိုးစုံ၊ ဆလတ်ရုိုးတုို့ ၊ ကြာစွယ်တုို့ ၊ ကန်စွန်းတို့ ၊ ရေမုန်ညင်းတုို့ လိုမျိုးတွေသာထည်လဲရှိတာလေ။ ငရုတ်ရွက်ကိုဝယ်တုန်းကရော၊ သုတ်စားတုန်းကရော၊ သင်နေတုန်းကရော ကျူတီလေးကိုအရမ်းသတိရနေခဲ့တာ။း)
ငါးရံ့ ခြောက်ကကိုယ်ထင်သလို ခွဲထားတာပါ။ ဘယ်သူခွဲတာမှလည်းမမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့အုိုခေတော့တင်ပေးမယ်နော်။
ဒီပို့ စ်တင်ဖြစ်တာ ဂျက်ကြောင့်ဆုိုလည်းမမှားဘူး။ ဂျက်ခဏခဏလာပြီးအဟောင်းလေးတွေအားပေးသွားခဲ့ရတာအားနာလို့ လေ။း)
အဲဒီဈေးက၀ယ်တဲ့အညွန့် တွေဆုိုရင်အဲလိုအသီးလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါပါလာတတ်တာသိပ်ပျော်တယ်လေ။ အဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဖရုံသားသားလေးတွေပေါ့။ ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တွေသွားတုန်းက ကြက်ဟင်းခါးညွန့် ကနေကြက်ဟင်းခါးသီးသားသားလေးတွေ၊ ငရုတ်ရွက်ကနေ ငရုတ်သီးတွေအများကြီးဘဲပါလာတယ်လေ။ ဟင်းပြန်ချက်စားလို့ ရအောင်ကိုပါတာ။း)
အဲဒီမှာလည်းအသီးအရွက်တွေပေါမှာပေါ့နော်။ ဒီမှာကတော့ အဲဒီလိုဈေးသွားမှ ဒီလိုကျမတို့ အကြိုက်အရွက်တွေရတတ်တာပါ။ ဒါလည်းရာသီချိန်မုို့ ပါ။ အမြဲတော့မရပါဘူး။ တုို့ စရာဗန်းကြီးကိုစောင်းငန်းစောင်းငန်းကြည့်မနေနဲ့ ဆွဲသာသွားတော့။ အဲဒီတုန်းက၀ယ်လာတာတွေအများကြီးဆုိုတော့အသီးအရွက်တွေရေရေလည်လည်မမေ့အောင်လှည့်စားနေရတာ။း)
ဖိတ်ပါတယ်။ ဖိတ်ပါတယ်။ ကျူတီပြောသလိုဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးကဘော်ဒါတွေစုံတဲ့နေ့ မှာဖိတ်ဘုို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဟဲ။
အဲလိုဈေးကများသောအားဖြင့်ကိုယ်တုို့ အေရှန်းအသီးအရွက်တွေကတော့ လာအိုးစ်တုို့ ဗီယက်နမ်တုို့ ကမ္ဘောာဒီးယန်းတို့ ဖီလစ်ပင်းနုိုတို့ တွေစိုက်ပြီးလာရောင်းတာတွေ့ ပါတယ်။
http://www.state.nj.us/jerseyfresh/searches/urban.htm ဒီလင့်လေးမှာ မီးမီးငယ်နေတဲ့ County ကုိုရုိုက်ထဲ့ပြီးရှာကြည့်ရင်အားလုံး ၀က်ဆုိုဒ်ရော လိပ်စာရော လမ်းညွှန်ဒါရုိုက်ရှင်း
ရောတွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ကိုယ်သွားချင်တဲ့ Roadside Market တို့Community Farmers Markets တုို့ ကို အပေါ်နားလေးမှာ ကလစ်ကြည့်လို့ ရတယ်နော်။ ကုိုယ်တောင်မီးမီးငယ်အတွက်ရှာရင်းအွန်လိုင်းကနေလျှောက်လည်လိုက်သေးတယ်။ မားကက်နှစ်ခုလောက်။း)
အဲဒီလင့်လေးကနေရှာကြည့်ပြီး သွားဝယ်ဖြစ်ရင်ပြောနော်။ ဒီကပြန်သွားရည်ကျရအောင်လို့ ။
မီးမီးငယ် August 5, 2012 at 7:28 PM
အိမ်နဲ့ ၁၄မိနစ်၊ရမိနစ် လောက်ဘဲဝေးတယ်တဲ့။
Iora August 5, 2012 at 11:35 PM
တစ်ချို့ ဖားမားစ်မားကက်က အေရှန်းအရွက်တွေသိပ်မရှိတတ်ဘူး။ Spanishတွေ American တွေကြိုက်တတ်တဲ့အသီးအရွက်တွေချည့်ရောင်းတာလည်းရှိတတ်တော့အင်တာနက်မှာအရင်
စနည်းနာသွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ တစ်ချို့ ကျတော့ကြီးတဲ့ဈေးဆုိုရင်တော့ အားလုံးစုံနေအောင်ရတာလည်းရှိတယ်။ ပန်းတွေအပင်တွေရောပေါ့။
အဆင်ပြေရင်ပို့ စ်တင်လိုက်နော်။း)
မီးမီးငယ် August 13, 2012 at 9:09 AM
ရေးတာ ၄နေရာ၊အဟိ..၁၄ နေရာလို့ မှားရိုက်လိုက်တယ်လေ။။
Iora August 5, 2012 at 11:35 AM
ဆောရီး ..ဆောရီး ကန်ဒီ..
ဘယ်လိုကျော်သွားလည်းသိပါဘူး။ ကန်ဒီလေးရေ ဟင်းရွက်မပါရင်စားလို့ ကိုမ၀င်ဘူး။ ဟင်းဟင်း..ဒါပေမဲ့အသားလေးရောပေါ့။း)
အန်တီဦး..လည်းဆောရီးနော်။ ကျော်သွားလို့ ။း)
အသီးအရွက်တွေ အဲဒီဈေးမှာအများစုက ဘာဝယ်ဝယ်တစ်စည်း တစ်ဒေါ်လာဘဲ။ ကြက်ဟင်းခါးညွန့် ကျတစ်ချို့ ဆိုင်တွေက ၂ကျပ်ခွဲတောင်တောင်းတယ်။ ငရုတ်ရွက်တွေကတရုတ်ဂရောစရီတွေမှာ တစ်ပေါင်ကို ၄ကျပ် ၅ကျပ်လောက်ပေးရတယ်။ ဒီမှာတော့တစ်စည်းတစ်ကျပ်ဘဲ။ မြင်းခွာရွက်လည်းဈေးကြီးတယ်။ တစ်ဆုိုင်လောက်ဘဲတင်တယ်။
T T Sweet August 5, 2012 at 3:32 PM
ဟင်းရွက်တွေစုံနေပါလား ဟရို့။ ဒီမှာတော့ ချဉ်ပေါင်ရွက် အဲလိုအစိမ်းရဖို့ မလွယ်ဘူး။ အိုင်အိုရာရဲ့ ဟင်းတွေကြည့်ရတာ " လူဖြစ်ကျိုးနပ်လောက်ရဲ့ ... " ဆိုတဲ့ စကားကို သတိရသွားတယ်။
Iora August 5, 2012 at 5:25 PM
အုိုင်အိုရာလည်းချဉ်ပေါင်ပေါ်ခါစကမရလိုက်ဘူး။ မနှစ်က၀ယ်ပြီးရေခဲရုိုက်ထားတာလည်းစားတာများလို့ ကုန်သွားတာအစောကြီး။ခုတစ်ခါရေခဲရုိုက်ထားဘုို့ ဝယ်ထားတော့လည်းနဲနဲနောက်ကျနေပြီ။ နောက်တစ်ခေါက်သွားရင်တော့ချဉ်ပေါင်သီးတုို့ အပွင့်တို့ တင်နေမလားမသိ။း)
Iora August 5, 2012 at 8:48 PM
mstint August 6, 2012 at 1:46 AM
တစ်နေ့လုံးအလုပ်များနေတာ အိုင်အိုရာရေ အွန်လိုင်းတက် ဘလော့ထဲလဲဝင်ရော စားချင်စရာလေးတွေက ခရီးဦးကြိုပြုနေတော့ ဗိုက်အတော်ဆာသွားပြီ။ ဟင်းရွက်တွေက လတ်ဆတ်နေတာပါလား အဲဒီလိုစိမ်းစိမ်းလေးတွေ ကြော်စားရင် ပိုချိုသလိုပဲ ဟင်းပွဲစေ့ အားပေးသွားပြီနော်။
မြတ်နိူးသူ(MUFL) August 6, 2012 at 2:17 AM
Iora August 6, 2012 at 7:46 PM
ဟုတ်တယ်တီတင့်..အဲဒီဈေးက၀ယ်လာရင်တချို့ အသီးအနှံဆုို တစ်လလောက်တောင်ခံတယ်။ စားရင်လည်းပိုချိုတယ်။ တရုတ်ဆုိုင်တွေက၀ယ်ရင်တော့သုံးလေးရက်ဆုိုပုတ်ရင်ပုတ်မပုတ်ရင်ရိမရိရင်ဝါဘဲ။
လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားတဲ့အခါထပ်လာလည်လှဲ့ ပါနော်။
ငရုတ်ရွက်သုပ်တကယ်စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ အုိုင်အိုရာတောင်ထပ်စားချင်နေတာ။ တရုတ်ဆုိုင်ကဈေးကြီးလုို့ အောင့်ထားတာ။ ယာသမားဈေးသွားဖြစ်မှဘဲဝယ်စားဖြစ်မှာ။း)
မြတ်ကြည် August 7, 2012 at 5:09 AM
:D အသီးအနှံတွေ စုံလို့ပဲ။ အကြွေးနော် မမ။ :P
Iora August 7, 2012 at 9:22 PM
Farmers Market ကျေးဇူးကြောင့်လေ။ ဟုတ်ကဲ့ အကြွေးနော်။း)
san htun August 8, 2012 at 5:03 PM
မမအိုင်အိုရာတို့ ဈေးက ချဉ်ပေါင်ရွက်တောင် ရတယ်..မိုက်တယ်ဗျား..အိမ်နားမှာ ဖားမားမားကတ် ရှိတာ သွားမယ်ကြံစည်တိုင်း ပျင်းတာနဲ့မသွားဖြစ်ဘူး..သွားဦးမှပဲ.တို့ စရာတွေ စုံလို့ ..ထမင်းမြိန်မှာ အသေအချာပဲ..
Iora August 8, 2012 at 7:32 PM
အဲဒီဈေးကတပါတ်မှာ ၂ ရက်ဘဲရှိတယ်။ အဲဒီနေ့ ကုိုသွားဖြစ်မှရတာလေ။ မသွားဖြစ်တာကခပ်များများရယ်။ တခါတခါကျဝယ်ချင်တာတွေကအရမ်းများတော့စွတ်ဝယ်ချလာရော။ ပြီးတော့မချက်ဖြစ်လိုက်တာတို့ နုိုင်အောင်မစားနုိုင်တာတို့ ဖြစ်ရော။ ဒါလည်းမမှတ်ဘူး ရောက်ရင်တော့အရမ်းပျော်ပြီးဝယ်ချင်နေတာဘဲ။ ပြီးတော့လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အေးရှန်းသီးနှံတွေမြင်ရတာလည်း ရီလက်စ်ဇေးရှင်းတစ်မျိုးဘဲလို့ ခံစားရတယ်။ သွားကြည့်သိလား။း)
blackroze August 10, 2012 at 11:25 PM
Though i'm late,i enjoy your colourful dishes.I also can't have my meal without green:D....
Iora August 11, 2012 at 11:51 AM
အိမ်နဲ့ ဝေးနေတဲ့သူတုိုင်းအဲလိုပါဘဲကွယ်။ ကျွေးချင်လိုက်ပစ်ပစ်ရယ်။
ဟုတ်တယ် အစိမ်းရောင်လေးမြင်မှထမင်းစားချင်စိတ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့။ အသားလေးလည်းပါမှ။ ဟိ..
Iora August 11, 2012 at 4:54 PM
ပစ်ပစ်..ကျွေးချင်လိုက်တာပစ်ပစ်ရယ်..လို့ ပြောတာ။ စာကျသွားတယ်။း)
Su August 12, 2012 at 1:26 AM
မမအိုင်အိုရာရေ စုလာလည်တာ ဗိုက်တွေအရမ်းဆာသွားတယ် အကုန်သဘောကျတယ် မရေ
Iora August 12, 2012 at 11:13 AM
လာလည်တာကျေးဇူးပါ။ ကိုယ်လည်းစုစီလာလည်ရင်သိပ်ဗုိုက်ဆာတာဘဲ။း)
monlay August 12, 2012 at 11:09 PM
Dear Iora,I want to know how to do frozen rosely leaf? I always visit your blog and I like your coking style.Thanks alot.
Iora August 13, 2012 at 10:50 PM
After washing the Roselle Leaves, just put them inapot and heat them. ( It is like make them cooked without adding anything. In Burmese " Lone te") When they all get cooked their color would change. Then let them cool. Later I put them in the Ziploc and keep them in the freezer, upper room of Refrigerator. I keep some in the small bags that good enough for soup and some in the big bags that good enough for making "Chinpaung Kyaw".
It will last for long time. I have kept them likeayear or more but usually it runs out before next season. :D
monlay August 14, 2012 at 11:00 AM
Thanks alot reply to me.Today I made it (lone te).Last3days I get roselle leaves.What ever you cook all of curry are looks delicious and colourful dishes.I waiting how to make cheese cake.:p
ritcivil84singapore October 7, 2012 at 1:07 AM
may i know how to go the farmer's market[in s'pore]?thks.
Actually as I live in the US I have no idea whether there are farmers markets in S'pore or not. I tried to look for you and I just found that there isafarmers market at Loewen Gardens. I am not quite sure if it is still open though.
According to the info it is held twiceamonth.
Here isalink. http://thepantrycookeryschool.com/wp/farmers-market/
ritcivil84singapore October 10, 2012 at 3:38 AM
thank you for reply,i thought you live in singapore,sorry about that.